Haweenay ilmaheeda ku dishay kitaabka Quraanka | Somaliska
Haweenay Muslim ah oo wiil ay dhashay oo 5 bilood jir ah ku dishay kitaabka Quraanka, ayaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Halmstad. Haweeneydaan ayaa la sheegay in bishii July ee sanadkaan ay wiilkeeda afka iyo sanka uga dabooshay Quraanka ka dibna uu sidaas ku geeriyooday.
Haweeneyda ayaa maxkamada u sheegtay in aysan doonayn in ay disho wiilkeeda balse ay doonaysay in ay badbaadiso. Ninkeeda ayaa sheegay in maalintaas ay xaaskiisa shaqada ku soo booqatay oo ay u sheegtay in aysan wanaagsanayn caafimaadkeeda. Waxa uu u sheegay in ay guriga ku sheegeysan doonaan oo ay Quraanka sii akhrisato. Sida uu qoray wargeyska Aftonbladet.
Ninkeeda ayaa markii uu guriga yimid waxa uu la kulmay ilmaha yar oo mayd ah oo dhaawacyo badan ku yaalaan. Haweenayda ayaa la sheegay in Quraanka ay afka iyo sanka uga dabooshay ilmaha yar. Haweeneyda ayaa qiratay dilka ilmaheeda iyadoo sheegtay in ay aragtay sawiro, waxay sheegtay in wiilkeeda uu la soo baxay geeso iyo madax nin weyn…waa sida ay hadalka u dhigtay.
Qareenka u doodaya haweenayda ayaa sheegay in aysan fiyoobayn oo madaxa looga jiro. Dhaqaatiirta ayaa xaqiijiyay in haweeneydaan aysan ku sugnayn xaalad caadi ah markii ay dilka geystay. Waxaa la sheegay in ay qabtay xanuuno ka dambeeya umusha.
Haweeneyda ayaa hada lagu hawaa xabsiga dadka waalan. Markii maxkamada la soo taagay ayaa ninkeeda oo ilmaynaya waxa uu sheegay in xaaskiisu ay ahayd raaliyo hooyo fiican ah. Waxa uu dalbaday in la caawiyo.
November 1, 2012 at 11:53
soomalida inteey qamri cabaan beey caruurta dilayaan
Asc waan idin salamay hadalada markii la qorayo ha la fahmo cabdirisakh ninka la yiraa soomalida maxad ka rabtaa waxa lagu yiri haweney muslimad ah lam shegin muslim qolada ay ka tahay Jimcaale adigan fadlan hadalka dhinaca wanagsan u qor quraan waxba laguma dilo ee wa alagu daweeyaa koey qofkani wa qof xanuunsan ilahey ha ka cafiyo han ka soo saro gacanta kuwa xabsiga ku haya
Walaal Jimcaale Quraan ayay kudishay maxaa kawadaa? Waataas aad leedahay waa qofxanuunsane? soow kama ficcnaateen in aad tiraahdo wayku dabooshay ama kugaraacday? Mise waxaad ulajeedaa in “CINWAANKU” aqriste yaasha soojiito??? waa yaab!!
Najma su’aashaada haddaan ka jawaabo. Arintu waa eray bixin oo keliya. Haddii aad akhrisay mowduuca meesha wax laga doodo ma yaalaan. Haweeneydu waxay u isticmaashay “kitaabka” quraanka ku qoranyahay in ay ku disho ilmaheeda. Dadka qaabab badan ayaa lagu dili karaa sida Xabad, Midi, Dhagax iyo xitaa buug (Sida kitaabka Quraanka).
Runtiina ujeedkayga ma ahan in aan ciwaanka mid soo jiidasho leh ka dhigo balse waxa uu ka turjumayaa dhacdada.
Waxaan idin leeyahay Soomaali wax hubsada. Mowduuca akhriya. Ka dibna fikrada ku darsada.
sc jimcaale waxba darbiyada madaxa haku garaacan sxb waxaad ciwaan uga dhigatay naag ilmaheeda kitaabka ku dishay sida waxaadna isticmaashay ciwanada jornalada swedishka waxaadna noo sheegtay in ilmaha yar dhaawacyo ku yaaleen ma dhaawacyadas uu ilmaha u dhintay mise kitaabkii sanka laga saaray ha kala hadlinee
ASC walal macan Qoraalkan Ilaa hada waxaan waayay meel Aan u Raaco marka maxa kawada waa Islaan maskaxda Loga Jiraa marka waxaad dhahday Kitaabka Quraanka Ayey ku jirtaa?
sdaan Aniga u fahmay Af somaliga Iney tahay Hooyo somaliyed oo Maskaxda ka Xanuunsan ?
marna waxaad dhahday sawro Ayey Aragtay
marka hada waxa Iga Su Aal ah Hooyada somaliyed ma maseer Darteet Ayey u Dishay willkeda?
walaal Jimcaale xanuunadaan caadiyan weey ku dhacaan haweenka intooda badan xiliga ay ummulaan laakiin waxaa nasiib daro ah in rageenu aysan fahamsaneyn waagii hore waxaan maqli jirey qofkaas ummushaa lagu marey waa xanuun jira inta badana dumarka wuu ku dhacaa calaamadihiisa waxaa ka mida gabadha umusha ah oo inta badan ooysa wax ka oohinayana aysan garaneyn marka ragoow ka warqaba xaasaskiina xiliga ay ummulaan saara qur,aanka Alle waa daawada ugu fiican lana xiriira dhaqaatiirta.
somalidu waa dad yaab badan bal wiilan qoralkis inta ges loqaday qofwalba wuxuu dono ayuu qoray somali lamshegin ee maxad umadina dhibka ulajeceshihiin gabadhaas ilahay maskaxdeeda ha usoceliyo xanunkaasna hakaqado insha alah ilmahasna waqtigisii ayadhamaday ilaahoow naf adledahay hanagusababin mid an dhalnayna kaba xanunbadan oo saqir ah waibanah ilahay ninkaas xaaskisa ha ucaafiyo asagana waxan dhihilaha kawad wadamadan qofku hadii jini waxas qabo wakusiibadanaan wayo fusqiga ayabadan marka inu geyo wadamada islamka oo culumada ugeya aad uficnanlaha ilaahoow dadkayga caawi. god bless somalia
Hadal walba iyo dhacdo walba oo GAALADA kuffaarta soo gudbiyaan , si Quraanka iyo Islaamka loo xumeeyo yaan indho la’aan lasoo gudbin Fadlan , Jimcaale Saxaafada yaysan isaga kaa qaldamin ,
Saxaafada GAALADA waxay , u taaganyihiin ineey Demoqraadiyo fidiyaan Islaamkana xumeeyaan , reer Galbeedkana difaacaan .
Adiga Saxafiga Muslimka ahna waxa alagaa rabaa inaadan dhaan walbaa iska dabo raacin …..
SAXAFI mUSLIM AH ayaa tahay ee , Muslimiinta afkooda ku hadal !!
ASC wan idinsalamay salankadib inti Muslim ah oxanunsan alle subhanuahu watacatcala hacafiyo amin tnakale gabadha masomaliba? Waa gabar Muslim ah ayalajiri adinkana somalinayaledihin qofka xanunsan kan walan kan dhintay kuli masobaliba? Muslimka alle haugargaro amin
To Jimacaale says:
November 1, 2012 at 19:03
walaal Jimcaale hadal ey Najma gabadha wadata ku tiri ha yareeysan brother ee waar un waalga fiicnaa inaad dhahdo Quraan ku dishey ee u bedel ku daboosho I iyo wixii lamid ahba
waxan filayah ad ayay ujeclad kitabka quranka kadibnah waxay kufakadhay udgonkisa sanka usar lkn asagu tabartas magarin
November 1, 2012 at 22:05
walee ninkii QOOLKA ALLAAH DUULAAN KU NOQDO SALKII WAA HOOG
su,aasha NAJMA haka jawaabo JImcaale hadi uu ula jeedin wax xumaato ah!
afka soomaaligu waa badan yahay ninba siduu u fahmo haw qaato qoraalka jimcaale qoray dhamaan waa sax wuxuuna ka tarjumayaa in haweenayda muslimada ah ee madaxa ka xanuunsan uu sheydaam ilmaheeda isga dhigaysewerkiisii sidaa darteed haweeneydu ilmihii ayay sheydaam geeso leh u malaysay wexeyna ku dabooshay oonafta kaga qaaday kitaab quraan sidaas ayuu macnuhu u dhacayaa wax fahma inteydinaan dadka weerar ku qaadin hana degdegina wax hubsada degdega iyo halmaanka sheydaamka ayaa loo nisbeeyey
ALLAHA CAAFIYO HOOYADA MUSLIMADA AH , GACANTA CADOWGANA ALLAHA KA SOO SAARO IYADA IYO INTII MUSLIM AH EE LA MIDKA AH BA,
WALAAL JIMACAALE ILAAHEY KA BAQ QUR’AANKU WAX MA DILO EE WAXBAA LAGU DAAWEEYAA, ILAAHEY SUBXAANAHU WATACAALAA WUXUU QUR’AANKIISA KU YIRI
” WALAA TASHTAROOW BI AAYAATIL LAAHI THAMANAN KHALIILAN” OO HADII AAN SOO KOOBO MICNAHEEDU YAHAY ” AAYADAHA ILAAHEY HAKU IIBSANINA WAXAANAN QIIMO LAHEEN. EE ILAAHEY KA BAQ, HADAL WANAAGSANA SOO QOR ,
qofka somaliga ah wey adag tahay sida wax loo faham siiyo hubaashii ninkaan odeyga ah jimcale sida aan aminsanahy marka uu meesha ku soo daawacay maaha wax asaga maskaxdiisa katimi sida u titolka uu ahaa ayuu afsoomali idinku turjumay hadii uu sida uu ahaa idinku bedeley maxaa rabteen inuu amaan idinku bedelaa? jawabtu waa maya sida uu uqoran yahay ayuu idiinku bedeley loqadena horaa lees ku raacey marka luqadaha kale loo bedelo wax badan iney noqdaan iney dad badan ay ku jahwareran ilaah baa naga dhigay soomaaali ku dhimo soomaaliga ee qab qabsiga daa sxbayaal,,lolz
waxan rabey inan dhaho marka luqadaha kale loo bedelo afkena somaaligaa waa lagu warera marka caadi iska dhiga,,,
walaaalayaal mawduuc meeel ku qoran ayuuu wiilku sooo turjinteeeee wax kale maha kolay waya aragnimo saxafanimo yarku malaha takale habka turjumada lafteeeda saytay ayuuu usooo qatay waa uu bedeli karayay hooyo ilmaheediiii dishay ayuuu dhihi karay lakiiin ciiiwaaanka ayuuu sidiiisiiii usoooo copy gareeyay markaaaa waxaan wiilka leeyahay deg dega yareee kana fiiirso waxa aaad bulshada usooo qorayso asc
asc asxabta oo dhan somali waa caadaded in ey kala qeybsanto
dhanka fikradaha mida kale aniga marki hore ee an akhriyey ciwanka dhacdada waxan moday in lagu garacay canuga
si uu u akhriyo qur aanka lakin marki aan guda galay wan fahmay waxa dhan waxna kama qaldana wiilku wax musan xumeynin ee akhriste yaashu dhaleceynta haka daayeen
jimale wad mahad san tahay runtii shaqo fiican ayad u heysa somalida
November 3, 2012 at 12:41
Jimcaale hakale saro ma somalido usoqora warka mise dadka kale ado somalida usoqorey waxa laga raba ino ciwanka kusoqoro hayo somaliyed o dishey cunigeda
jimcaale waa nin fikirkiisa uu fasaaday sida qudaar meel ku raagtay waxuun kamid yahay kumanaaka dhalinyarda somaliyeed ee uu hadafkii islaanima iyo kii soomali nima kadhumay oo calashooda ushaqeeystayaasha isu badalay
jimcaale sxb wax walba ha iska soo qorin hadii aad waydo waxaa qorto wax yabo badan ooo la qoraa jira marka arinkaan hooyada ilmaheeda kitabka ku dishay wax aqliga gala maha
ee waa sheko ay wadaan cadan kaa iyo galadu oo is lamka lagu garafaynayo marka sxb wax walba ka fiirso malidana waxa xun ha u horseedin plz arinmahaan oo kale ha soo gud bin
Muslim meelkasta oo uu joogo, inuusan waal nayn mashaki ayaa kujira, maxaa lays ku haystaa meeshaan,
Waayo qofka dood kaqaba, how dacwoodo dowlada, waxaan waleelkeen uusooqorey waxa uu kasoo qaatey meel.
Utaga joornaalka uu kasoo qaaatey, joojiya cawaanimada,
Islam cidna madooneyso. Maxaa idin ka khaldan.
Saan iyo sidaas af maahan, yaa ogba waxaa tihiin.
Kulaabta dalkiinii ama ogolaada sharciyada udegen dalka.
asc inta jiran ilaahey caafimaad hasiyo. teeda kale waxaa aan idin sheegaa kitaabka qur aanka yaan laga been abuuranin . saqiirkaas tiisa ayaa dhamaatay